ईमेल मार्केटिंग: मुद्दाहरूको उदाहरणहरू जुन खोल्ने दर बढाउँदछ पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा » ईमेल मार्केटिंग: मुद्दाहरूको उदाहरणहरू जुन खोल्ने दर बढ्छ
के तपाईंलाई थाहा छ ... ईमेल प्राप्तकर्ताहरूको 47% ले एक ईमेल खोल्ने कि केवल विषयको आधारमा निर्णय नगर्ने निर्णय गर्दछ, र 69% ले समान मापदण्डको आधारमा ईमेललाई स्पामको रूपमा रिपोर्ट गर्ने निर्णय गर्छ? जसरी तपाईं हेर्नुहुन्छ, मुद्दाहरू एक हुन् महत्वपूर्ण मुद्दा, youtube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस् अनावश्यक मूल्य तपाईंसँग केहि शब्दहरू छन् प्रयोगकर्तालाई आफूसँगै रहन मनाउन, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई राम्ररी छान्नु पर्छ। तर राम्रो कुरा के कुञ्जीहरू को श्रृंखला हो जुन सधैं काम गर्दछ। के तपाई उनीहरूलाई जान्न चाहानुहुन्छ? यो लेख सम्झना छैन!
काम गर्ने ईमेल मार्केटिंगको उदाहरणहरू
कुन मार्केटिंग अभियानहरूमा संसाधनहरूले काम गर्छन् र किन? जे होस् प्रत्येक ब्रान्ड एक विश्व हो, त्यहाँ "आजीवन" प्रविधिहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको अभियानहरू केन्द्रित गर्न र ईमेलहरूको लागि प्रभावकारी मुद्दाहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसकारण, हामीले 10 कोटिहरूमा उदाहरणहरू वर्गीकृत गरेका छौं उनीहरूले प्रयोग गर्ने संसाधनको आधारमा।
1) जरुरीको भावना / घाटा को डर
त्यहाँ एक विश्वव्यापी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त छ जुन लगभग सबै व्यक्तिहरूमा लागू हुन्छ, र यो हामी हो हामी केहि हराइरहेको छु भन्ने भावनालाई प्रतिरोध गर्न धेरै गाह्रो लाग्छ । मेलिम्पम्पका अनुसार "अर्जेन्ट", "महत्वपूर्ण", "सतर्कता" वा "अन्तिम मिनेट" को प्रभावले ओपनिंग अनुपातमा प्रभाव पार्छ र उच्च आंकडामा पुग्न सजिलो बनाउँदछ।
हाम्रो मार्केटिंग अभियानहरूको फाइदा लिन हामी अभाव (सीमित उपलब्धता) वा जरुरीता (सीमित समय) को भावना सिर्जना गर्न सक्छौं। यहाँ केही उदाहरणहरू छन् :
तपाईंको सदस्यता समाप्त हुन लागेको छ।
यो हेर्नको लागि तपाईसँग एक दिन छ।
तपाईंको योजना आज राती समाप्त हुन्छ।
(सप्ताहन्त मात्र) लाभ लिनुहोस् यो भन्दा पहिले!
केवल आज: 50% छुट छ…
तपाईंको पोइन्ट्स रिडिम गर्न अन्तिम मौका।
यो जिज्ञासा बिरालालाई मार्यो ... र यसको मालिकलाई पनि। एउटा विषय जुन पेसाजनक छ यसले हामीलाई ईमेल खोल्न प्रोत्साहित गर्दछ यो के हो भनेर जान्नको लागि, जब श्रृंखलाले हामीलाई सस्पेंसको बीचमा छोडिदिन्छ र हामी अर्को अध्याय हेर्न आवश्यक छ।
तपाईंको प्राप्तकर्ताहरूको जिज्ञासालाई देख्नका लागि, तपाईंले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ (र ईमेलमा यसको उत्तर दिनुहोस्), प्रयोगकर्तालाई चाखलाग्दो केहि वाचा गर्नुहोस् वा केवल अपेक्षित नभएको वक्तव्यको साथ उनलाई आश्चर्यचकित गर्नुहोस्। यहाँ तपाईंसँग अधिक विचारहरू छन् :
यो ईमेल नखोल्नुहोस् .
अन्तिम दिन यो ईमेलको बारे थाहा पाउनु हो।
10 बेतुका बानीहरू जसले तपाईंलाई धनी बनाउन सक्छ।
के यो मार्केटिंगमा उत्तम क्यारियर हो?
कैदीहरूले के खान्छन्।
क्रिसमसको बारेमा7डरलाग्दो चीजहरू।
हामी संग तपाईं को लागी एक आश्चर्य उपहार छ!
यदि तपाईंले प्राप्तकर्ताहरूलाई ठूलो स्वरले हाँस्न (वा कमसेकम उनीहरू मुस्कुराइ) पाउनुभयो भने, तपाईंसँग धेरै गाईवस्ताहरू हुनेछन्। को रमाइलो एक धेरै शक्तिशाली हतियार संचार स्तर हो।
राम्रो हास्य उत्पन्न गर्न गाह्रो छ, तर यो प्राप्त भएको क्षण र प्रतिहरू हाँसोको सिर्जनाकर्ता हुन्, तपाईंले त्यो देख्नुहुनेछ। तपाईंको खोल्ने दर बढ्छ सकरात्मक
यी उदाहरणहरूमा एक नजर लिनुहोस् :
कहाँ बियर पिउने अब (बुधबार 6.45 मा बिहान पठाइएको छ)।
तपाईको फोन च्याट गर्दा यस्तो राम्रो स्वाद कहिल्यै आइसकेको थिएन।
हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं।
प्रस्तावहरू जुन हामी गर्व गर्दछौं (हाम्रा भतिजा मार्कोसलाई मनपर्दैन)।
हो, म गर्भवती छु। तपाईं मेरो पेट देख्न रोक्न सक्नुहुन्छ।
नयाँ वर्षमा 27 व्यक्ति बेवास्ता गर्न।
मानव जातिको अर्को ठूलो सत्य यो हो कि गहिरो तल हामी सबैलाई अन्य व्यक्तिहरूले स्वीकारेको महसुस गर्न चाहन्छौं र थोरै देखाउँदा पनि।
यो व्यर्थ7घातक पापहरू मध्ये एक हो र कहिलेकाँही यस क्यापिटिकिओ अवधारणासँग खेल्न लायक छ हाम्रो ईमेलहरु बीच अधिक एपर्चरर उत्पन्न गर्नुहोस् .
हेर्नुहोस् कि यी अभियानहरूले कसरी उनीहरूको उद्घाटन अनुपात सुधार गर्न यो संसाधन प्रयोग गर्दछ:
पछिल्लो वर्षको फेसन नलगाउनुहोस्।
खेल प्यान्टहरू जुन तपाईंलाई एक महान गधा बनाउँदछ।
स्टाइलिश साइकिल चालकहरूको लागि प्रेरणादायक उपहार।
के तपाईं यस बर्षमा आफूलाई सुधार गर्न चाहानुहुन्छ?
अर्को ठूलो पाप जसमा हामी सबै थोरै खस्छौं ... कम्तिमा जब यो राम्रो छुटको फाइदा लिनको लागि आउँदछ लोभ .
अफरहरू र विशेष पदोन्नतिहरू तपाईको सुरुको अनुपात बढाउनको लागि एक उत्तम विचार हो तर सावधान रहनुहोस्: यदि छुट बढी नै हो भने, यसको प्रभाव घट्छ किनभने प्रयोगकर्ताहरू यो वास्तविक छ भनेर विश्वास गर्दैनन्, एडेस्ट्राको एक अध्ययनका अनुसार।
अर्को धेरै साधारण पूँजी पाप: हामी आफैंले काम बचत गर्न मन पराउँदछौं। धन्य हुन आलस्य अनि त्यो बाँकी संसारले हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्दछ .
समयको अभाव हाम्रो महान ब्यालेस्ट मध्ये एक हो, सर्टकट र सजिलो तपाईंको ईमेल को मामला को लागी एक धेरै उपयोगी हुक हो।
यी हुन् उदाहरणहरू ईमेलको जुन प्रापकको लागि जीवन सजिलो बनाउँदछ:
अन्तिम ल्यान्डि points पृष्ठ सिर्जना गर्न5पोइन्टहरूको चेकलिस्ट।
तपाईको डेटाबेसलाई छिटो बढाउन ह्याक्स।
व्यस्त व्यक्तिलाई कसरी प्रभावकारी ईमेलहरू पठाउने।
मेल टेम्पलेट्स प्रयोग गर्न को लागी तयार छ।
100 ब्लग लेख लेख्न सजिलो विचारहरु।
7) समस्या र चुनौतीहरू
यदि तपाईं वास्तवमै तपाईंको खरीददार व्यक्ति चिन्नुहुन्छ (र यदि होईन, तपाईं पहिले नै ढिला हुनुहुन्छ!) तपाईंलाई थाहा छ कि उसले दिनदिनै सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू के हुन्। यदी तिम्रो इमेल मार्केटिङती समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, तिनीहरूसँग तपाईंको ईमेलहरू खोल्न धेरै पोइन्टहरू हुनेछन्।
लागि उदाहरणका :
कसरी सस्तो क्रिसमसको खाना व्यवस्थित गर्ने।
तपाईको भान्छाकोठामा बढि ठाउँ पाउनुहोस्।
यदि तपाईंले लटरी जित्नुभएन भने ...
तपाईंको अर्को रातको उडान कसरी बाँच्ने।
अनुत्पादक कार्यहरूमा समय बर्बाद गर्न रोक्नुहोस्।
एक दिन मात्र5मिनेटमा भाषा सिक्नुहोस्।
Retargeting को एक आवश्यक हिस्सा हो ईमेल मार्केटिंग रणनीति । विचार प्रयोगकर्ताहरूलाई ईमेल पठाउनु हो जसले कार्य समाप्त गर्नु अघि रूपान्तरण प्रक्रिया छोडेका छन् (उदाहरण को लागी, उनीहरूले आफ्नो कार्टका लागि आईटमहरू छनौट गरेका छन् तर भुक्तानी पूरा गरेनन्)।
यी उदाहरणहरू यस प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूको उद्देश्य भनेको उनीहरूलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गर्नु हो:
के तपाईंले केहि बिर्सनुभयो? यहाँ तपाईंसँग 20% छुट छ।
उत्पादनमा तपाईले रुचि राख्नु भएको मूल्य घटेको छ।
के तपाईंले यी नयाँ प्रस्तावहरू छुटाउनुभयो?
तपाईंको XX खाता तपाइँको लागि कुर्दै छ।
एक 2015 विशेषज्ञ अध्ययन अनुसार, ईमेलको विषयको नाम सहितको सबै क्षेत्रहरूमा औसतमा 29.3% ले खुल्ने अनुपात बढाउँदछ।
← ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर सोमबार: अधिक बेच्न अनलाइन मार्केटि sell कुञ्जीहरू
किन एक पत्राचार सूची छ? →